के तपाईलाई टाउको दुखिरहने समस्या छ ? यस्ता छन् निको पार्ने घरेलु उपाय | Kattwal.com
के तपाईलाई टाउको दुखिरहने समस्या छ ? यस्ता छन् निको पार्ने घरेलु उपाय
१७ माघ,धनगढी । आजको व्यस्त र तनवपुर्ण जिन्दगीमा टाउको दुखाई एक साधारण समस्या जस्तै बनेको छ । तर लगातार टाउको दुख्ने समस्याले भने तपाईको कार्यक्षमता र तपाईको पुरै दैनिकीलाई प्रभावित पार्ने गर्दछ । दैनिक र लगातार टाउको दुखाईको समस्याबाट छुटकारा पाउन औषधी नै सेवन गर्नु भन्दा घरेलु र प्रकृतिक उपचार पद्धती उत्तम मानिन्छ । यसले विना साइड इफेक्ट टाउको दुखाईबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
माइग्रेनको उपचारमा पुदिना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि तपाईंलाई लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने तपाईंले पुदिनलाई चियामा मिसाएर पिउन सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई तुरुन्त राहत प्रदान गर्छ ।
लसुनको रस पिउनुहोस:
धनियाँ, जीरा र अदुवाको रस पिउनुहोसः